I-milk thistle iyaziwa kakhulu kusukela ebuntwaneni obuncane. Njengezitshalo eziningi zokwelapha, izakhiwo zayo eziwusizo zaziwa ngabokhokho bethu. Ososayensi sebefikile ebufakazini besayensi bokuthi lesi sitshalo siyasiza. I-thistle yobisi iqukethe i-microelements ewusizo namavithamini ezingaphezu kuka-150 izihloko. Ngokutadisha ukuhlaziywa kwezinto eziphilayo zaleso sitshalo, ososayensi bathola into engavamile kakhulu futhi engavamile ephilayo-silymarin, okuyinkimbinkimbi ye-flavonoid. Leli qembu liyakwazi ukushintsha i-membrane yeseli yesibindi ukuze kuthi lapho izidakamizwa eziyingozi zingena emzimbeni, ukungena kwabo kwamaseli kuvinjelwe. I-Silymarin iphinde ivuselele izinqubo zokuvuselela futhi isiza ukwenza izinto zeprotheni, ivikela i-hepatocyte, ikhulise ukuphikiswa kwazo ezinhlobonhlobo zezifo kanye nezinhlungu.
Ubisi lwe-milk is umkhiqizo wokucubungula imbewu yezitshalo. Lo mkhiqizo uhlotshiswe nge-fiber, futhi, futhi, usebenza njengendlela yokuhlanza emathunjini, ngenxa yalokho okufakwe khona i-microflora ewusizo kuwo.
Ukubuyiselwa, ukuhlanza kanye nokuqinisa ukusebenza kunikezwa nge- thistle thistle. Ukusebenza kwayo ekuvikeleni isibindi emiphumeleni emibi nokujwayelekile kwemisebenzi yayo akungabazeki ukuthi kukhulu kakhulu. Cabanga ngesifo sofuba-esinye sezifo ezimbi kakhulu, kanye ne-AIDS nomdlavuza. I-Schrot kusuka ebisini i-thistle ne-bhotela evela kumbewu yakhe iyakwazi ukumelana nalesi sifo. Amavithamini, i-phospholipids nama-acids amafutha abalulekile avikela futhi abuyisele kuphela isibindi, kodwa namanye ama-tissue nezitho.
Cabanga ngobisi lwe-thistle shroud. Isicelo saso sisebenza ezimweni lapho:
Umzimba kufanele usizwe ukunqoba ukulutha utshwala nokudakwa kwezidakamizwa;
Kubalulekile ukususa emzimbeni ngemikhiqizo ehambisana nokusetshenziswa kwezidakamizwa ezinamandla;
Izimali ezingeziwe ziyadingeka ngemuva kwekhemotherapy ukubuyisela umzimba;
Umzimba udinga ukubuyiselwa emva kwezifo ezinzima zesibindi.
Isicelo se-Schroth se-thistle sitholakala nasemahlathini. Kunconywa ngezifo zesikhumba eziqhamukayo, i-dermatoses, i-vitiligo, i-alopecia, i-lichen ebomvu, i-psoriasis, njll. Leli khambi lisiza umzimba ukuba ucindezele ukukhiqizwa kwe-histamines, ehlobene ngqo nezinsizakalo kanye nokubonakaliswa kwe-allergen.
Ukubuyekezwa kwe-Schroth thistle kufanelekile ngokufanele. Ikhono layo lokusheshisa ukwakhiwa nokuhoxiswa kwe-bile kusiza ukuvuselela izinqubo zokugaya umzimba nokugaya ukudla. Lesi yisizathu esihle sokuwusebenzisa ngezifo ezinzulu ezifana ne-cholecystitis, i-cirrhosis, ukulimala kwesibindi ngenxa yokuphuza utshwala, isikhunta esinobuthi, ama-chemical and drugs compounds.
I-milk lexist ibuye ibe nethonya elihle ekuvinjeni nasekwelapheni imivimbo ye-varicose, isifo sikashukela.
Ngifuna ukutshela mayelana nendlela yokusetshenziswa kwalesi sidakamizwa. Uma unayo imbewu yobisi thistle, khona-ke ukudla kungalungiswa ngokugaya nge-grinder yekhofi. Ngaphambi kokudla, imizuzu engama-25-30, ubisi lwe-thistle shroud kufanele buhlolwe kahle. Sidinga ngo-1 tsp. Ukuphuza kulandela amanzi amaningi afudumele. Yiba nesineke, ngoba inkathi yokungena ingaba ingxenye eyodwa nengxenye kuya kwezinyanga ezimbili. Uma kunesidingo, phinda le ukwelashwa kanye ne-prophylaxis ngenyanga.
Ukwandisa inani lezinto eziphilayo ozidlayo, sebenzisa ngesibindi u-thistle ubisi ekhishini. Ungakwazi ukufaka isibindi sakho nokuzivikela emzimbeni nge-phyto-tea, kanye nokusebenzisa isidlo se-thistle njengezithasiselo ekulungiseleleni izitsha ezihlukahlukene. Impendulo yakho izoba yinto enhle kuphela, futhi uzokwazi ukwabelana nabo nabangani bakho.
"Artiflex": imiyalo yokusetshenziswa, impendulo
I-SIGNITEF (amaconsi eso): imiyalelo yokusetshenziswa, incazelo, ukwakheka nokubuyekezwa
Imithi Afalah: imiyalelo yokusetshenziswa
"A endlini ngaphandle ephumayo": okujabulisayo ifilimu abadlali